Mac တွင် PDF ဖိုင်များကို တည်းဖြတ်နည်း ငါ mac ကပါ။
Adobe မှ PDF ဖော်မတ်သည် ကွန်ပြူတာတွင် စံတစ်ခုဖြစ်လာပြီး ပင်မပုံစံဖြစ်လာသည် ဟုဆိုနိုင်သည်၊ အင်တာနက်ပေါ်တွင် မည်သည့်စာရွက်စာတမ်းအမျိုးအစားကိုမဆို မျှဝေပါ။. ဖိုင်များကိုချုံ့ရန်အတွက် .zip ဖော်မတ်ကဲ့သို့ စံဖော်မတ်တစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်၊ ဤဖော်မတ်တွင် ဖိုင်များကိုဖွင့်ရန် အပလီကေးရှင်းကို ထည့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။
သို့သော်၊ ကျွန်ုပ်တို့အလိုရှိသောအခါတွင်အရာများရှုပ်ထွေးလာသည်။ သင့်ရဲ့ content တွေကိုတည်းဖြတ်ပါMicrosoft Word ၏ .docx ဖော်မတ်နှင့် မတူသောကြောင့်၊ ၎င်းကို တည်းဖြတ်ရန် မရည်ရွယ်ဘဲ မျှဝေရန်သာ ဖြစ်သည်။ ကံကောင်းထောက်မစွာ၊ Mac ပေါ်တွင် PDF ဖိုင်များ၏အကြောင်းအရာကိုတည်းဖြတ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုခွင့်ပြုသည့် application များရှိသည်။
ထို့နောက်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အတွက် အကောင်းဆုံး applications များကို ပြသပေးသည်။ Mac တွင် PDF ကိုတည်းဖြတ်ပါ။၊ အခမဲ့ နှင့် အခကြေးငွေ ဟူ၍ အမျိုးအစား နှစ်မျိုးခွဲထားသော အပလီကေးရှင်းများ။ အခမဲ့ဖြေရှင်းချက်များသည် အမြဲတမ်းအလိုအပ်ဆုံးဖြစ်ပြီး၊ အဓိကအားဖြင့် တိကျသောလိုအပ်ချက်ရှိသည့်အသုံးပြုသူများအနေဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၎င်းတို့ကို စတင်တော့မည်ဖြစ်သည်။
1 Mac အတွက် အခမဲ့ PDF တည်းဖြတ်သူများ
1.1 preview ကို
1.3 ပရော်ဖက်ရှင်နယ် PDF
2 Mac တွင် PDF တည်းဖြတ်သူများကို ပေးဆောင်သည်။
2.1 PDF ကျွမ်းကျင်သူ
2.3 PDFElement – ​​PDF Editor နှင့် OCR
3 အွန်လိုင်း PDF တည်းဖြတ်သူများ
Mac အတွက် အခမဲ့ PDF တည်းဖြတ်သူများ
အိုကေ၊ မူရင်း macOS အစမ်းကြည့်အက်ပ် PDF ဖိုင်တည်းဖြတ်သူမဟုတ်ပါ။သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်သည့်တစ်ခုတည်းသောအရာမှာ PDF ဖော်မတ်ရှိသော ဖိုင်များတွင် စာသားမှတ်စုများထည့်ရန် စဉ်းစားရန် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
အကယ်၍ သင့်လိုအပ်ချက်များသည် ဤဖော်မတ်တွင် စာရွက်စာတမ်းအပြည့်အစုံကို ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းမပါဝင်ပါက ၎င်းအစား၊ အချို့ကို သင်ထည့်ချင်ရုံပါ။ အခြားပြင်ဆင်ချက်မှာ၊ အထူးသဖြင့်၊ ၎င်းသည် အလွန်တိကျသောကိစ္စဖြစ်ပြီး သင့်နေ့စဉ်ပုံမှန်မဟုတ်ပါက၊ အခြားအပလီကေးရှင်းများကို အားကိုးရန်မလိုအပ်ပါ။
LibreOffice မှ ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ရရှိနိုင်သော အခမဲ့ကိရိယာအစုံနှင့် မည်သည့်စာရွက်စာတမ်းအမျိုးအစားကိုမဆို ဖန်တီးနိုင်သည့် Draw အပလီကေးရှင်း၊ ရုပ်ပုံတည်းဖြတ်သူသည် Adobe ဖော်မတ်နှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သည်။
ဤလျှောက်လွှာဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်နိုင်သည် PDF ဖိုင်များကိုတည်းဖြတ်ပါ။ ၎င်း၏အကြောင်းအရာကို ပြုပြင်မွမ်းမံရန်နှင့် နောက်ပိုင်းတွင် ပြုပြင်မွမ်းမံမှုများကို ထိန်းသိမ်းရန် တူညီသောဖော်မတ်သို့ ပြန်လည်တင်ပို့ပါ။
မသန်စွမ်း LibreOfficeDraw ကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၎င်းမှတဆင့် Application တစ်ခုလုံးကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရပါမည်။ အောက်ပါ link ကို။
PDF Professional Suite သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုခွင့်ပြုရုံသာမက application တစ်ခုဖြစ်သည်။ PDF ဖိုင်များကိုတည်းဖြတ်ပါ။သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့အား မည်သည့်ပုံစံမှ ဖန်တီးနိုင်စေပါသည်။
ဤအပလီကေးရှင်းသည် ပြီးပြည့်စုံသော လုပ်ဆောင်ချက်များကို ထောက်ပံ့ပေးသည်။ မှတ်ချက်ချခြင်း၊ ကြည့်ရှုခြင်း၊ ဖောင်များဖြည့်ခြင်း၊ လက်မှတ်ထိုးခြင်း၊ တည်းဖြတ်ခြင်း၊ အမှတ်အသားပြုခြင်း၊ ကောက်ကြောင်းများ၊ ပေါင်းစည်းခြင်း၊ ခွဲခြင်း၊ ချုံ့ခြင်း… ထို့အပြင်၊ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အား PDF ဖိုင်များကို Word/HTML/TXT/PNG/JPG ဖိုင်များအဖြစ်သို့ ပြောင်းနိုင်စေပါသည်။
Professional PDF အက်ပ်ကို သင့်အတွက် ရနိုင်ပါသည်။ လုံးဝအခမဲ့ download လုပ်ပါ Mac App Store တွင် အောက်ပါလင့်ခ်မှတဆင့်။
PDF ကိုပရော်ဖက်ရှင်နယ် - Annotate, ဆိုင်းဘုတ်အခမဲ့
Inkscape သည် ပုံဆွဲကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သော်လည်း ၎င်းကို ကျွန်ုပ်တို့လည်း အသုံးပြုနိုင်သည်။ PDF ဖိုင်အယ်ဒီတာစာရွက်စာတမ်းကိုဖွင့်သည့်အခါ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ပြောင်းလဲခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင် စာသားအဖြစ် စာသားတင်သွင်းခြင်း ရွေးချယ်ခွင့်ကို စစ်ဆေးပါသည်။ စာရွက်စာတမ်းကို တည်းဖြတ်ပြီးသည်နှင့် ၎င်းကို PDF ဖော်မတ်သို့ ထပ်မံတင်ပို့နိုင်ပါသည်။
PDF ဖိုင်ကို တည်းဖြတ်ရမယ်ဆိုရင်၊ သင်ခြယ်လှယ်လိုသော မည်သည့်ပုံကိုမဆို ထည့်သွင်းပါ။ပုံတည်းဖြတ်ခြင်းကို ပုံမှန်အသုံးမပြုပါက သို့မဟုတ် အချိန်ကိုတတ်နိုင်သမျှနည်းနည်းဖြုန်းလိုပါက သင်လိုအပ်သော application မှာ Inkscape ဖြစ်သည်။
သင်လုပ်နိုင်သည် inkscape ကို mac အတွက် လုံးဝအခမဲ့ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။ ဖြတ်. ဒီ link ကို. ဤအပလီကေးရှင်းသည် အခမဲ့ဖြစ်ပြီး၊ အခမဲ့လည်းရနိုင်သည်။ Windows နဲ့ Linux ။
Skim သည် အခမဲ့ application တစ်ခုဖြစ်သည်။ macOS Preview အက်ပ်၏ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းများကို တိုးချဲ့သည်။. ဤအပလီကေးရှင်းသည် သိပ္ပံဆိုင်ရာဆောင်းပါးများကို ကြည့်ရှုခြင်းနှင့် မှတ်သားခြင်းအတွက် ကိရိယာတစ်ခုအဖြစ် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားခြင်းဖြစ်သည် (ဟုလူသိများသည်။ စာတမ်းများ) မည်သည့် PDF ဖိုင်ကိုမဆို ကြည့်ရှုရန် ပရိုဂရမ်ကို အသုံးပြုနိုင်သည်။
ဒီ app ရဲ့အဆိုးဆုံးအရာကသူ့ရဲ့ interface ပါပဲ။နေ့စဥ်အဆင်ပြေပြေလုပ်ဆောင်နိုင်စေရန်အတွက် အမှန်တကယ်အချိန်အနည်းငယ်ယူရသော အင်တာဖေ့စ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
Skim ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် PDF ဖိုင်များကို မျက်နှာပြင်အပြည့်ကြည့်ရှုနိုင်သည်၊ မှတ်တမ်းတွင် မှတ်စုများထည့်ကာ တည်းဖြတ်ပါ။မှတ်စုများကို စာသားအဖြစ် ထုတ်ယူပါ၊ ၎င်းသည် Spotlight နှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သည်၊ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အား အရေးကြီးဆုံးစာသားကို မီးမောင်းထိုးပြနိုင်စေသည်၊ ၎င်းတွင် အသိဉာဏ်ရှိသော ဖြတ်တောက်ခြင်းကိရိယာများပါ၀င်သည်...
ကျနော်တို့တတ်နိုင်သမျှ Skim ကို အခမဲ့ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။ ဒီမှတဆင့် link ကို.
Mac တွင် PDF တည်းဖြတ်သူများကို ပေးဆောင်သည်။
လျှောက်လွှာတစ်ခု ပိုပြီးပြည့်စုံ Mac App Store တွင်ရရှိနိုင်သည်မှာ Spark mail client ကဲ့သို့တူညီသော developer များမှအက်ပ်တစ်ခုဖြစ်သည့် PDF Expert ဖြစ်သည်။ ဤအပလီကေးရှင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် မည်သည့်စာရွက်စာတမ်းအမျိုးအစားကိုမဆို တည်းဖြတ်နိုင်သည့်အပြင် ၎င်းတို့ကို ဖန်တီးခြင်း၊ အကာအကွယ်များထည့်ခြင်း၊ လက်မှတ်များ...
PDF ကျွမ်းကျင်သူ- PDF ကိုတည်းဖြတ်ပါ။ ဈေးနှုန်းကတော့ Mac App Store မှာယူရို ၈.၉၉ နဲ့ရောင်းချတယ်။
PDF ကျွမ်းကျင်သူ - PDF ကိုတည်းဖြတ်ပါ€ 79,99
Adobe သည် PDF ဖော်မတ်ကို ဖန်တီးသူဖြစ်သောကြောင့်၊ ဤဖိုင်အမျိုးအစားနှင့် လုပ်ဆောင်ရန် အကောင်းဆုံး application တစ်ခုမှာ Adobe Acrobat ဖြစ်သည်။ ဤအပလီကေးရှင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖိုင်များကို PDF ဖော်မတ်ဖြင့် တည်းဖြတ်ရုံသာမက ကျွန်ုပ်တို့လည်း လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။ ၎င်းတို့ကိုဖန်တီးပါ၊ ဖန်တီးပြီးသောစာရွက်စာတမ်းများကိုဖြည့်ရန်၊ စာရွက်စာတမ်းများကိုစကားဝှက်ဖြင့်ကာကွယ်ရန်၊ လက်မှတ်တစ်ခုပါ ၀ င်ရန်အကွက်များထည့်ပါ။
Adobe Acrobat ကို အသုံးပြုနိုင်ရန် Adobe Creative Cloud စာရင်းသွင်းမှု လိုအပ်ပါသည်။ထို့ကြောင့် သင်သည် ဤအပလီကေးရှင်းကို ပုံမှန်အသုံးမပြုပါက၊ လစဉ်စာရင်းသွင်းမှုကို ပေးဆောင်ရန် မထိုက်တန်ပါ။
PDFElement – ​​PDF Editor နှင့် OCR
PDFElement သည် လိုအပ်သောကြောင့် ဤဖော်မတ်ရှိ ဖိုင်များနှင့် ပုံမှန်အလုပ်လုပ်နေသမျှ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသော application တစ်ခုဖြစ်သည်။ လစဉ်၊ သုံးလတစ်ကြိမ် သို့မဟုတ် နှစ်အလိုက် စာရင်းသွင်းမှုကို ပေးဆောင်ပါ။. Adobe Acrobat မှ ကမ်းလှမ်းထားသည့် တစ်ခုတည်းသော အားသာချက်မှာ ၎င်းသည် စျေးသက်သာသည်။
PDFElement ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်နိုင်သည်။ PDF ဖိုင်များကိုတည်းဖြတ်ပါ၊ အမျိုးအစားအားလုံး၏အမှတ်အသားများနှင့်မှတ်ချက်များထည့်ပါ။အခြားဖိုင်ဖော်မတ်များမှ PDF ဖိုင်များကိုဖန်တီးပါ၊ အမျိုးအစားအမျိုးမျိုးကိုဖန်တီးပြီးဖြည့်စွက်ပါ၊ PDF ကိုလက်မှတ်ထိုးပါ၊ အဖွဲ့စာရွက်စာတမ်းများ...
PDFelement-PDF Editor နှင့် OCRအခမဲ့
အွန်လိုင်း PDF တည်းဖြတ်သူများ
သက်သာတဲ့နည်းလမ်းမဟုတ်ပေမယ့် privacy ကိုထိန်းသိမ်းရန်မဖိတ်ခေါ်ပါ။ဝဘ်ပေါ်တွင် PDF ဖိုင်များကို တည်းဖြတ်သောအခါတွင် နောက်ထပ် စိတ်ဝင်စားစရာ ဖြေရှင်းချက်တစ်ခု တွေ့သည်။ ကျောက်တံတား.
Smallpdf သည် တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဝဘ်အခြေခံ PDF တည်းဖြတ်သူ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အား ဤဖော်မတ်တွင် ဖိုင်များကို တည်းဖြတ်နိုင်စေပါသည်။ ၎င်းသည် အခမဲ့အစမ်းသုံးခွင့်ကို ပေးဆောင်ပြီး Pro ဗားရှင်းသည် လစဉ်စာရင်းသွင်းမှုတစ်ခု လိုအပ်ပြီး ဘရောက်ဆာ တိုးချဲ့မှုတစ်ခု ပါဝင်သည်။
ဖိုင်များကိုတည်းဖြတ်ရန် အခြားအွန်လိုင်းရွေးချယ်ခွင့်ကို တွင်တွေ့နိုင်သည်။ PDFescapeလုံးဝအခမဲ့ဖြေရှင်းချက်မဟုတ်ပေ။10 MB သို့မဟုတ် စာမျက်နှာ 100 အထိ ဖိုင်များကို တည်းဖြတ်နိုင်စေပါသည်။. ၎င်းကို Chrome၊ Firefox၊ Edge အတွက် တိုးချဲ့မှုမှတစ်ဆင့်လည်း ရရှိနိုင်သည်။
ဤဝဘ်ဆိုဒ်ကို ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ တည်းဖြတ်၊ ဖန်တီးပြီး ကြည့်ရှုပါ။ PDF ဖော်မတ်ဖြင့် စာရွက်စာတမ်းများ၊ မှတ်ချက်များကို ထည့်ပါ၊ ဖောင်များဖြည့်ပြီး ၎င်းကို ကျွန်ုပ်တို့သိသရွေ့ စကားဝှက်ဖြင့် ကာကွယ်ထားသည့် စာရွက်စာတမ်းများကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Apple » လဲ tutorial » Mac တွင် PDF ဖိုင်များကို တည်းဖြတ်နည်း
Safari ရှိ "bug" သည် သင့် Google အကောင့်မှ အချက်အလက်များကို ပေါက်ကြားစေပါသည်။